ဘီးသဲအဝတ်လျှော် - တန်ဇန်းနီးယားနယ်
ကနေဆောင်းပါး: သဲအဝတ်လျှော် | အချိန်: ဧပြီလ 9, 2013 | tag:သဲအဝတ်လျှော်	|
ဘီးသဲအဝတ်လျှော်, ရှန်ဟိုင်း XSM ဘီးသဲအဝတ်လျှော်, စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးရှိပစ္စည်းကိရိယာများ, သတ္တုရိုင်းကြိတ်စက်ကိရိယာများ manufacturers.Ore သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်, ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်သတ္တုရိုင်းနယ်ပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပါတယ် ခါးပတ်ပေါ်ကို, တုန်ခါလမ်းခွဲအဆိုပါစေလွှတ်ပေါ်ကိုပစ္စည်းကိရိယာများသတ္တုရိုင်း မေးရိုးနယ်, သက်ရောက်မှုနယ်, ဟိုက်ဒရောလစ်နယ် တစ်ဦးကိုနှိမ်နင်းကုန်ကြမ်းသတ္တုရိုင်းသည်, တစ်ဦးတို့ကဒုတိယ သေးငယ်တဲ့ jawcrusher, တူနယ် တို့ကသတ္တုရိုင်းအလယ်တန်းကိုနှိမ်နင်းတတိယစိစစ် တုန်ခါမျက်နှာပြင် ဖြည့်ဆည်းသည့်သတ္တုရိုင်း၏စံသတ်မှတ်ချက်များအတွက်ပို့ဆောင်နေသည် ဘောလုံးကိုကြိတ်, ultrafine ကြိတ် တို့ကသတ္တုရိုင်းတတိယအဆင့်ကုသမှု သံလိုက်ထည့်ထား, flotationmineral စက် needs.Of သင်တန်းအမျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်, ဒီရုံယေဘုယျသတ္တုရိုင်းအပြောင်းအလဲနဲ့ဖြစ်ပါသည်, ရှန်ဟိုင်း XSM သတ္တုရိုင်းသင့်ရဲ့ type ကိုအကောင်းဆုံးသင်သည်ကိုက်ညီသောသင်သည်ငါ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်အခြေခံပြီး, သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါကကျနော်တို့ညာဘက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ်နှိပ်ပါကြိုဆိုကြသည် မျဉ်းအိုင်ကွန်၏ဘေးထွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများသငျသညျအသေးစိတျအဖြေ willgive ။
Xuanshi ဘီးသဲအဝတ်လျှော် တစ်ဦးကိုသဲထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုသဘာဝသဲအဝတ်လျှော်စစ်ဆင်ရေးမရှိမဖြစ်အပိုင်းအစများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဤသည်အဓိကအားဖြင့်အဆောက်အဦး, စုစုပေါင်းအပင်များ, ဖန်စက်ရုံ, ပါဝါဘူတာရုံ, ကွန်ကရစ်ရေကာတာနဲ့တခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာသန့်ရှင်းရေး, ခွဲခြား, ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ခြင်းနှင့်စနစ်အားသဲစက်မှုလုပ်ငန်း၏အခြားမျိုး၌ ပို. ပို. အသုံးစေရန်စသည်တို့ကိုစင်ကြယ်သော, မြင့်အပြောင်းအလဲနဲ့မြန်နှုန်း၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းမြန်နှုန်းသန့်ရှင်းရေး, သဲ၏ဆုံးရှုံးမှုလျော့နည်း, သေးငယ်သည်။
1 ။ အနိမျ့ရေစားသုံးမှု, စွမ်းအင်ချွေတာရေး, ညစ်ညမ်းမှုအခမဲ့ဖြစ်သည်။
2 ။ ဖယ်ရှားခြင်းဖုန်မှုန့်, အညစ်အကြေး, ချောမှုန့်။
3 ။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖွဲ့စည်းပုံ, အဆင်ပြေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, (မျက်နှာပြင် မှလွဲ. ) မျှဝတ်ဆင်အစိတ်အပိုင်းများ, ရှည်လျားဝန်ဆောင်မှုဘဝ
4 ။ မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှု, တိုးမြှင့်အဝတ်လျှော်မြန်နှုန်း။
V-ခါးပတ်နှင့်ဂီယာလျှော့ချမှတဆင့်မော်တာများကမောင်းထုတ်အဆိုပါလှုံ့ဆျောဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်။ အဆိုပါသဲ, လှုံ့ဆျော၏အရေးယူမှုအောက်, လမ်းခွဲကျင်းများမှတဆင့်အဝတ်လျှော်ကျင်းသို့ဝင်ရောက်လာသဲလိပ်နှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းအညစ်အကြေးကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်လွယ်ကူသော dewatering များအတွက်ရေငွေ့အလွှာကိုဖျက်ဆီးဖို့အတူတကွကလည်းရှေ့ဆက်နေဆဲ။ အဆိုပါ sametime မှာအားကြီးသောရေစီးဆင်းမှုကိုဖန်တီးရန်ရေ add နှင့်အရှင်လျတ်ဆိပ်ကမ်းကိုကနေအညစ်အကြေးပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါသန့်ရှင်းတဲ့သဲအဆိုပါဓါးအားဖြင့်မပယ်ရှားသောကြောင့်, လှုံ့ဆျောလှည့်အနေဖြင့်ဥတုကျင်းသို့သွန်းလောင်းဖြစ်ပါတယ်။
(t / h) စွမ်းအား
မှတ်ချက်: ဒီသတ်မှတ်ချက်ပဲရည်ညွှန်းသည်, မည်သည့်အပြောင်းအလဲများကိုဘီးသဲအဝတ်လျှော်ထုတ်ကုန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။